« Biennale de Venise »: hisolo tena antsika i Joël Andrianomearisoa | NewsMada
« Biennale de Venise »: hisolo tena antsika i Joël Andrianomearisoa
Nampahafantarina, omaly tetsy Ambatonakanga, ny fankatoavana amim-pomba ofisialy ny fandraisana anjaran’i Madagasikara any amin’ny “Biennale de Venise”. Hisolo tena antsika any i Joël Andrianomearisoa, mpiangaly ny kanto ankehitriny.
Sambany hanana tranoheva any amin’ny “Biennale de Venise”, antsoina koa hoe “Exposition internationale d’art contemporain”, i Madagasikara. Hotanterahina ny 11 mey hatramin’ny 24 novambra 2019 izany. Voninahitra lehibe ho an’ny firenena ary tombony goavana ho an’ny mpanakanto hisolo tena antsika any, i Joël Andrianomearisoa, izany.
Anisan’ireo hetsika zavakanto manana ny maha izy azy izy ity, anisan’ireo fampirantiana tranainy indrindra, nijoro voalohany tamin’ny taona 1895. Araka ny anarany, miompana tanteraka amin’ny fampahafantarana sy fanomezan-danja ny kanto ankehitriny ny “Biennale de Venise”, tanterahina isaky ny roa taona.
Ambohimpihaonan’ny mpanakanto mpamorona fanta-daza, manerana izao tontolo izao, ity hetsika ity. Araka izany, hita ao ireo zavakanto maro tsy fahita andavanandro. Samy manana tranoheva hampirantiany ny firenena tsirairay voaasa handray anjara amin’izany. Dingana manan-danja entina mampahafantatra ny firenena malagasy, ny kolontsainy sy ny kantony ny fandraisany anjara voalohany amin’ity “biennale” ity.
Teraka tamin’ny taona 1977 i Joël Andrianomearisoa, izay mivezivezy eto Antananarivo sy any Paris amin’ny asa maha mpanakanto azy. Ny taratasy, ny lamba, ny hazo, ny sary… Santionany amin’ny akora lalaoviny ireo. Marobe ny fampirantiana notanterahiny tany amin’ireo toerana lehibe mikasika ny zavakanto, any ivelany any sy tamina hetsika samihafa, toy ny “festivals”, nifaneraserany tamin’ireo heverina ho ngeza eo amin’ny tontolon’ny kanto ankehitriny.
Azo singanina amin’ireny, ohatra, ny tao amin’ny Maxxi ao Rome, ny tao Hamburger Bahnof ao Berlin, ny tao Smithsonian ao Washington ary ny tao Centre Pompidou ao Paris. Amin’izao fototana izao, manatanteraka fampirantiana mitokana, ao amin’ny Centro de Arte Alcobendas any Madrid, izy.
Efa nahazo ny loka “Arco Madrid Audemars Piguet 2016” i Joël Andrianomearisoa. Ankoatra izany rehetra izany, misy ny toeram-pampirantiana na “galerie” miara-miasa aminy, toy ny Sabrina Amrani any Madrid sy ny Primo Marella any Milan ary ny RX any Paris.